I-Fungicide, ekwabizwa ngokuba yi-antimycotic, nayiphi na into enetyhefu esetyenziselwa ukubulala okanye ukuthintela ukukhula kokungunda. Iifungicides zihlala zisetyenziselwa ukulawula ukungunda kwe-parasitic enokubangela ukonakaliswa kwezoqoqosho kwisityalo okanye kwizityalo zokuhombisa okanye engozini impilo yezilwanyana zasekhaya okanye zabantu. Uninzi lwezolimo kunye ...
Sebenzisa ukungunda ngokhuseleko lwe-apple scab ngaphambi kwexesha losulelo
Ubushushu obuzinzileyo eMichigan okwangoku abunakuthelekiswa nanto kwaye buthe babamba ongezantsi ngokubhekisele kwindlela apile akhula ngokukhawuleza ngayo. Ngeemvula eziqikelelwe ngolwesiHlanu, Matshi 23, nakwiveki ezayo, kubalulekile ukuba izilimo ezinokhwekhwe zikhuselwe kolu hlaselo ...
Ukuhlaziywa kweBiocides kunye neFungicides
I-Biocides zizinto ezikhuselayo ezisetyenziselwa ukuthintela ukukhula kweentsholongwane kunye nezinye izinto eziyingozi, kubandakanya nefungi. I-biocides iza ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje nge-halogen okanye i-metallic compounds, ii-organic acid kunye ne-organosulfurs. Ngamnye udlala indima ebalulekileyo kwipeyinti nakwimapeyinti, amanzi ...
Ulawulo oluhlangeneyo lwezinambuzane kugxilwe kuMboniso wabalimi beGreenhouse 2017 ngo-2017
Iiseshini zemfundo kwi-2017 Michigan Greenhouse Growers Expo zibonelela ngohlaziyo kunye neendlela ezikhulayo zokuvelisa izityalo eziluhlaza ezanelisa umdla wabathengi. Kwisithuba seminyaka elishumi edlulileyo, kuye kwakho ukukhula okuthe chu komdla woluntu malunga nokuba ziveliswa njani kwaye phi izinto zolimo ...